एउटै व्यक्ति सञ्चालक पनि अर्को संस्थाको सीइओ पनिः राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा के छ हेरौं ? - Wnepal.com
नेपालका बैंक र बीमा कम्पनीहरुमा एउटै व्यक्ति एउटा संस्थामा सीइओ र अर्को संस्थामा सञ्चालक बनेको घटना प्रसस्त छन् ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै जारी गर्दै एउटा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रहेको व्यक्ति अर्को संस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने भनिएको छ । तर, प्रभु बैंक लिमिटेड, शिखर इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बीमा समिति, प्रभु क्यापिटलमा एउटै व्यक्ति दुबै तिर सञ्चालक पनि उच्च कर्मचारी पनि रहेको उनीहरुकै आधिरिक बेवसाईटमै देखिन्छ ।
हेरौं को कहाँ सीइओ, डिसीइओ, उच्च कर्मचारी वा सञ्चालकहरु छन् । कथा रमाईलो मात्रै छैन चाख लाग्दो पनि छ ।
बैंक र बीमा कम्पनीका अध्यक्षज्यूहरुको विश्वास पात्र भएपछि जताततै पैसै पैसा यता तलब उता भत्ता यो कस्तो बैकिङ्ग र बीमा हो कहाँ छ नियमक निकाय ? कहाँ छ राज्य ? शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीइओ दिप प्रकाश पाण्डे, सिटिजन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक छन् । यस्तै प्रभु बैंक लिमिटेडका डिपुटी सीइओ मणीराम पोखरेल प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ किरण कुमार श्रेष्ठ बीमा समितिका सञ्चालक छन् ।
प्रभु बैंककै चिप अपरेटिङ्ग अफिसर दिनेश थकाली प्रभु क्यापिटल कम्पनी लिमिटेडका मेनिजिङ्ग डाइरेक्टर छन् । यी त पात्र मात्रै भए यस्ता दर्जनौ बैंक विकास बैंक र बीमा कम्पनीमा दोहोरो भूमिका पाएका सयौं छन् ।
बैंक र बीमामा गरिब र निमुखा जनताको शेयर छ । डिपोजिट छ तर, एउटै व्यक्तिले एकातिर तलब र अर्कोतिर भत्ता बुझ्ने गरेको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले एउटा संस्थाको प्रमुख वा उच्च कर्मचारी अर्को संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाउने निर्देशका नै जारी गरेको देखिन्छ । तर, लागु भएको छैन । कारण के हो । यो कसले हेर्ने हो ? मुलुक अर्थमन्त्री विहिन छ । अर्थमन्त्रालय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै चलाएका कारण अव यी र यस्ता दुवै हातमा लड्डु लिनेहरुलाई कारवाही हुनु जरुरी देखिन्छ ।
उपत्यका भित्र अब प्रत्येक बैंकका ८ वटा शाखा मात्र खुल्ने